तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७४ साल चैत ३ गते, शनिबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७४ साल चैत ३ गते, शनिबार।
धार्मिक चैत्र ३ २०७४ ekhabarnepal
वि.सं. २०७४ साल चैत ३ गते। शनिबार। इश्वी सन् २०१८ मार्च १७ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ चिल्लागा। चैत्र कृष्णपक्ष। तिथि– औंसी,
श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्नेछ। अरूको मुख ताक्नाले आँटेको काममा पछि परिनेछ। लाभांश अरूका लागि खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। दिउँसोदेखि काम र आम्दानीमा बाधा हुनेछ भने फजुल खर्च बढ्न सक्छ। आफन्तको सम्पर्कबाट टाढिनुपर्ला। गलत निर्णयले जरिवानाको स्थितिसम्म पुर्याउने समय रहेकाले सजग रहनुहोला।
पुरुषार्थी काम प्रारम्भ हुनेछ। दिगो काममा जग बसाउने मौका छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। दिउँसोदेखि आफ्नो आम्दानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। मिहिनेतको फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। पछिका लागि भने आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला। परिस्थितिले चुनौतीहरू निम्त्याए पनि दिउँसोदेखि स्थितिमा सामान्य सुधार आउनेछ। प्रतीक्षित नतिजा सन्तोषजनक नआउन सक्छ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि फाइदा हुनेछ।
पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ भने पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। मध्याह्नदेखि रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ। मन मिल्नाले प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ। कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। व्यवसायले मनग्गे आम्दानी दिलाउनेछ।
हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। बेसुरमा बोल्ने बानीले दु:ख पाइनेछ। काम बिग्रने डरले सताउनेछ। मध्याह्नदेखि मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ।
छोटो समयमा उपलब्धि हातलागी हुनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ। दिउँसोदेखि पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने अवस्था आउला । पहिलेका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन्। ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले सताउनेछन्। आफन्त र साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला।
वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। तापनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। मध्याह्नदेखि चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ।
प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। दिउँसोदेखि अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। बोली–व्यहारमा संयम रहनुपर्ला।